Dr. Tint Swe's Writings: Calcium အမျိုးသမီး၊ ကလေးနဲ့ ကယ်လ်စီယမ်
၁။ ဆရာမင်္ဂလာပါ ကျွန်မနာမည့့် ပါ။ မန္တလေးကပါ။ အသက်၂၄ပါ။ သမီးလေးက ၁ နှစ်ရှိပါပြီ။ ခုသမီးလေးက သွား ၂ ချောင်းဘဲပေါက်သေးတယ်။ လမ်းလဲ မလျှောက်တတ်၊ မတ်တပ်တောင်ယိုင်ယိုင်ဘဲရပ်တတ်တယ်ဆရာ။ အဲဒါဘာလို့လဲဆရာ။ တစ်ချို့ကအဲဒါအရိုးပျော့လို့တဲ့အရိုးသန်မာတဲ့ဆေးတိုက်ပေးရမယ်တဲ့ဟုတ်ပါသလားဆရာ။
၂။ အဒေါ် အသက် ၅၅။ သွေးဆုံးပြီးသားပါဆရာ။ ပိန်ပိန်ပါးပါး အရပ်အသင့်အတင့်ပါ။ သူက D3Calcium သောက်နေတာ နေတိုင်းပဲဆရာ။ စွဲသောက်ရင် ပြဿနာရှိနိုင်ပါသလားဆရာ။
၃။ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၄၂ နှစ်ပါ။ သွေးချိန်က ၉၇ /၆၁ ပါ။ ရောဂါအထွေအထူးမရှိပါရှင့်။ သွေးမဆုံးသေးပါ။ နယ်ကျန်းမာရေးမှုးက အရိုးပွကာကွယ်ဆေးညွှန်းပါတယ်ဆရာ။
၄။ ဆရာ ကျွန်မက အသက် ၄ဝ ပါ။ အရိုးပါးတာကို ကာကွယ်ချင်ရင် Ca ကို ဘယ်လောက်သောက်သင့်ပါလဲ၊။
၅။ ကျမ ကလေးတွေ ဒီဆေးသောက်နေတာကောင်းလား။ ဆေးဆိုင်ကရောင်းတာ အသက် ၁ နှစ် ၉ လ ကလေး တိုက်နေတာ နားမလည်လို့ တိုင်ပင်တာပါဆရာ။
၆။ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်များရင် ကျောက်ကပ်ထိတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးလလောက်က allergic ဖြစ်လို့ ဆေးခန်းသွားပြတော့ သမီးကို စီထရင်းလိုဆေးမျိုးနဲ့ Calcium J သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ဆေးဆိုင်က Calcium 500 နဲ့အတူတူပဲဆိုပြီး ရောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့ Calcium J ကိုပဲ ဝယ်သောက်တယ်။ တော်ကြာ Calcium က လိုအပ်တာထက် များသွားမှာ စိုးလို့ပါ။
၇။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ သမီးအသက် ၃၄ နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်မရှိပါဘူး။ အခုတလော ညတခေါင်ပက်လက်အိပ်တာ
• ညောင်းလို့ တဖက်ကိုလှည့်ရင်ချက်ချင်းလှည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ရှင်။ ခါးအောက်ပိုင်းက နာလာပြီး တဖြည်းဖြည်း လှည့်မှရပါတယ်ရှင်။ အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲရှင်ဆရာ။ အချိန်လေးရရင်ဖြေပေးပါနော်ဆရာ။
• ခုထိ ရောဂါတခုခုနဲ့မတူပါ။ ရာသီ မသိပါ။ ၃၄ နှစ်ဆိုရင် ကယ်လ်စီယမ် တနေ့ ၁ ပြားကျ သောက်သင့်ပါပြီ။
• ရာသီက ၁၇ ရက်နေ့ကပြီးသွားပါပြီဆရာ။ အခုလိုဖြစ်နေတာ တလလောက်ရှိနေပါပြီဆရာ။
• ရာသီဆိုတာ လမှန် မမှန်သာလိုပါတယ်။
• လ မှန်ပါတယ်ဆရာ။ ရက်ကတော့ နဲနဲကွာပါတယ်ဆရာ။
• ကယ်လစီယမ်က ဘာတံဆိပ်သောက်မလဲရှင်ဆရာ။
(ကယ်လ်စီယမ်) ဘယ်လောက်လိုသလဲ အသက်။ ကျား-မ အလိုက်လိုအပ်တယ်။
သက်သတ်လွတ်စားသူ၊ Lactose intolerance ရောဂါရှိသူ၊ (ပရိုတင်း) အစာများလွန်သူ၊ ဆာစားများလွန်းသူ၊ Osteoporosis အရိုးအားနည်းသူ၊ Corticosteroids ကော်တီကိုစတီရွိုက်ဆေး ကြာကြာသုံးနေရသူတွေမှာ အစားအသောက် ဂရုစိုက်ယုံနဲ့ မလုံလောက်ပါ။
Hypercalcemia သွေးထဲမှာ (ကယ်လ်စီယမ်) များနေခြင်း
အကြောင်းတရား ၇ ပါးရှိတယ်။
၂။ ကင်ဆာ ဝ့ဝ၁% ရှိတယ်။ Multiple Myeloma (မာလ်တီပယ်-မိုင်လိုးမား)၊ Squamous cell cancer of the lung အဆုပ်ကင်ဆာတမျိုး၊ ရင်သားကင်ဆာ နောက်ပိုင်း၊ ကျောက်ကပ်ကင်ဆာ နောက်ပိုင်း၊ Squamous Cell Cancer of the Head and Neck (very advanced) ဦးခေါင်း၊ လည်ပင်း ကင်ဆာ နောက်ပိုင်း။
၄။ ဗီတာမင် (ဒီ) ဆေသောက်တာ များသွားခြင်း၊
2. Cervical Spondylosis လည်ပင်း ကျီးပေါင်းတက်နေပါတယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/cervical-spondylosis.html
3. Lumbar spondylosis ခါးရိုးကျီးပေါင်းတက်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/lumbar-spondylosis.html
4. Osteoarthritis အရိုး-အဆစ်နာရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/osteoarthritis.html
5. Osteophytosis အရိုးရောဂါတမျိုး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/osteophytosis.html
6. Osteoporosis အရိုးပွရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/osteoporosis.html
7. Vitamin D ဗီတာမင် (ဒီ) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2009/08/vitamin-d.html